लाइसेन्स परीक्षामा खुल्यो नयाँ रहस्य: ट्रायल फेल भएपनि १२ हजार रुपैयाँ दिए पास ! – List Khabar
Home / समाचार / लाइसेन्स परीक्षामा खुल्यो नयाँ रहस्य: ट्रायल फेल भएपनि १२ हजार रुपैयाँ दिए पास !
admin December 20, 2021 समाचार Leaveacomment 111 Views
काठमाण्डौ –काभ्रे घर भएका एक युवा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को परीक्षाका लागि राजधानी नजिकैको जिल्लाबाट गत कार्तिकमा लाइसेन्सको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा दिन यातायात व्यवस्था कार्यालय, चावहिल आए । उनको आउनजान गरेर झण्डै २० हजार खर्च भयो । ति युवालाई आशा थियो सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा निष्पक्ष हुन्छ ।तर उनले यसको ठिक उल्टो दृश्य देखे । बिहान १० बजे यातायात व्यवस्था कार्यालय चावहिलमा लिखित परीक्षाको टोकन लिनका लागि गएका उनी बेलुकासम्म लाइनमै उभिए ।
उनले बिहान १० बजे देखि बेलुकी ४ बजेसम्म लाइनमा बस्नु पर्यो । बल्ल उनको पालो आयो तर त्यहाँ उनको आँखाअगाडि यस्ता दलालहरु देखिए जसले त्यतिखेरै गएको मान्छेलाई पनि ५०० रुपैयाँ दियो भने टोकन दिइरहेका थिए ।दलालहरुले त्यो दिन भन्दा अघि नै त्यहाँका कर्मचारीहरुसँगको सेटिङमा धेरै टोकनहरु एकैपटक लिएर आफूसँग राख्ने र कमाउ धन्दाका लागि बेच्ने गरेको त्यहाँ उपस्थित एक युवाले बताए ।
यो पनि साइलेन्ट हर्ट अट्याकः यी सामान्य लक्षणदेखि सतर्क रहन आवश्यक
छाती दुख्ने, मुटुको चाल बढ्ने, चिसो लाग्ने, पसिना आउने र धेरै कमजोर महसुस हुने जस्ता लक्षणहरूले हृदयाघातको सङ्केत गर्छ ।
तर, हर्ट अट्याकको सङ्केत दिने लक्षणहरू माथि उल्लेख गरिएभन्दा पनि फरक प्रकृतिका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ लक्षण नदेखिए पनि हृदयाघात हुनसक्छ । कहिलेकाहीँ हर्ट अट्याक भएको भए पनि थाहा नहुन सक्छ । यसलाई साइलेन्ट हर्ट अट्याक भनिन्छ । साइलेन्ट हर्ट अट्याक हुँदा निकै असामान्य वा कुनै पनि लक्षण महसुस नहुने हुनसक्छ ।
Previous ‘तेरो लोग्नेले मलाई कर णी गर्यो लोग्ने बचाउने भए ४ लाख ले’ भन्दै माग्ने दुई जना पक्राउ
Next यी युवतीको दमदार जिम्न्यास्टिक, मन्त्री समेत सेएर गरे -को हुन हेर्नुस।